Shirar Nabadda lagu xoojinayo oo Gaalkacyo ka socda (Sawiro) – Radio Daljir
Shirar Nabadda lagu xoojinayo oo Gaalkacyo ka socda (Sawiro)
Febraayo 1, 2018 7:20 g 0
Mulkiilaha Hotel-ka Five Star ee Koonfurta Gaalkacyo ayaa qado sharaf u sameeyay maantay waftdiga Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Sareeye Gaas Cabdiwali Jaamac Xuseen (Gorod) Wafdi Wasiiro ah oo ka socda Dowladda Puntland, kuwaasi oo maalmahaan ku ku howllanaa Nabadda Mudug.
Wasiirada Puntland ee kulanka joogay waxaa ka mid ah Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Puntland C/wali Xirsi Cabdille (Indho-guran) Wasiiru-dowlaha Madaxtooyada Puntland Bhrhaan Cilmi (Filig) Wasiiru-dowlaha Kalluumaysiga Puntland Dr C/raxmaan Aw-Jaamac (Kulmiye) Madaxwaynihii hore ee Galmud Iyo Duqa Gaalkacyo Maxamuud Yaasiin (Tumey) Iyo Guddoomiyaha Gobolka Mudug Xassan Abgaaloow.
Waxaa ujeedada kulanku ahaa in si dhab ah la isaga waraysto waxyaabihii ka hirgalay Qodobadii lagu hishiiyay 18 December 2017 Iyo in la darso sida looga gud-bi karo caqabadaha inta badan Nabadda hor taahan.
Kulanku intii uu socday waxaa dhinacyadu isku af-garteen in xaaladda Gobolka Mudug xilligaan ay aad u wanaagsan-tahay. Waxaa kaloo hoosta laga xariiqay in ay hirgaleen 8 Qodob oo ka mid ah Hishiiskii Gaalkacyo, labada qodob ee dhimana aad loogu rajo wayn yahay in la dhamaystiro Alle idankii.
Shirkaan ayaa kusoo beegmaya xilli dadka reer Gaalkacyo ay dareemayaan Nabad Iyo Xasillooni, wixii ka dambeeyay hishiiskii magaalada Gaalkacyo.
Martisoor: Prof. Beeldaaje iyo Xaaladda Dhaqaale ee Adduunka (dhegayso)